လူမီနီယမ်အလွိုင်း Frame ကအလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး China Manufacturer
ဖေါ်ပြချက်:ခက်ခဲမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကြိတ်စက်တံခါးဈေးနှုန်း,အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို Safe တံခါးကာကွယ်ပေးနိုင်လုံခြုံရေး,ကားဂိုဒေါင်ရိုးရှင်းသောခက်မြန်တံခါး
Home > ထုတ်ကုန်များ > roller Shutter တံခါး > လူမီနီယမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး > လူမီနီယမ်အလွိုင်း Frame ကအလိုအလျောက်အမြင့်မြန်နှုန်းတံခါး
မော်ဒယ်နံပါတ်။: HF-J 201
အဆိုပါရိုးရှင်းသောခက်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုတဦးတည်းအတွက်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး, စွမ်းအင်ချွေတာရေး, တံဆိပ်ခတ်ခြင်း, မြင့်မားတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်, လေတိုက်ခုခံ, ကြာရှည်ခံမှု, anti-theft သတ်မှတ်။ မြန်နှုန်းမြင့် partition ကိုအတူအသစ်သတ္တုစက်မှုလုပ်ငန်းတံခါးကိုအမျိုးအစား, တံခါးကိုကောင်းသောအပူထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်အကျိုးသက်ရောက်မှု, အလင်းတံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်မြင့်မားခွန်အားနှင့်အစာရှောင်ခြင်းမြန်နှုန်း featuring, ထူးခြားတဲ့အပူလျှပ်ကာဖွဲ့စည်းပုံဒီဇိုင်းကိုချမှတ်။ တစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်တံခါးကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ပါသည်တံခါးကိုဤအမျိုးအစားနှင့်တကွ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ၏စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. 80% အားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်လိမ့်နိုင်ပါတယ်။
မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း, Automatic, လုံခြုံရေး, အပူထိန်းသိမ်းခြင်း, အကြမ်းခံ။
သငျသညျရှေးခယျြဖို့အတှကျကွဲပြားခြားနားသောအရောင် panel က
တံခါးကိုကျယ်ပြန့်အသုံးပြုရတာလွယ်ကူ, ဥရောပနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိစက်မှုဇုန်စက်ရုံများမှာအသုံးပြုလည်ပတ်ရန်လွယ်ကူ, ယုံကြည်စိတ်ချရသောနှင့်ပုံပန်းသဏ္ဌာန်လှပနေသည်။ အဆိုပါထုတ်ကုန်မြင့်မား, ယုံကြည်စိတ်ချရသောလက်တွေ့ကျတဲ့, operate လုပ်ဖို့လွယ်ကူပြီးအနိမ့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုစရိတ်များဖြစ်ပြီး, တပ်ဆင်ပြီးနောက်အပြည့်အဝတစ်နှစ်အာမခံပေးထားပါသည်။ ထိန်းချုပ်မှုစနစ်လျှောက်လွှာအတွက်တစ်နှစ်လျှင်ထက်ပို 150,000 အမှား-အခမဲ့လုပ်ရပ်များရှိပါတယ်သေချာသည်အဓိကအဖြစ်စက်မှုဇုန်ထိန်းချုပ်၏လယ်ပြင်တွင်သစ်ကိုဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်း DSP chip ကိုအသုံးပြုသည်။
ရိုးရှင်းသောခက်အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုအထူးထိန်းချုပ်မှုစနစ်ကချမှတ်, servo အထူးထိန်းချုပ်မှု box ကို Two-အဆင့် 220-သုံးအဆင့် 380V-ပါဝါ 0.75-1.5-2.2KW, အဓိကပါဝါထိန်းချုပ် switch ကိုအတူထိန်းချုပ်မှု box ကိုအရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ်, ကို manual အလိုအလျှောက်ပြောင်းလဲ button ကိုချမှတ် ကိုယ်တိုင်တက်ဆင်းခလုတ်ထိန်းချုပ်ထားသည်။ တံခါးအဖွင့်အမြင့်၏တိကျသောထိန်းချုပ်မှု။
အဆိုပါမော်တာ drive ကို system ကိုအထူး servo motor ကို system ကိုချမှတ်: Two-အဆင့် 220V-သုံးအဆင့် 380V-ပါဝါ 0.75-1.5-2.2KW, လူသိများတဲ့အမှတ်တံဆိပ်အန်ကုဒ်; အရေးပေါ်လက်စွဲအဖွင့်ယန္တရား;
1. အကောင်းဆုံးမှ (ထိုကဲ့သို့သောအနီအောက်ရောင်ခြည်ရောင်ခြည်ကဲ့သို့) ဘေးကင်းလုံခြုံရေးအစောင့်များ၏လုပ်ငန်းဆောင်တာ Make နှင့်အလျင်အမြန်ပြန်ခုန်ထွက်။
2. ခိုင်ခံ့ Overload စွမ်းရည်။ အခြို့သောကြိမ်နှုန်းမြင့်အခါသမယတွင်, switch သည်လက်၏အလိုအလျှောက် function ကိုပြောင်းလဲနားလည်သဘောပေါက်ပြီးလျှင်, အစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုများ၏ဘေးကင်းလုံခြုံစစ်ဆင်ရေးသေချာနိုင်သည့်ထက်ပိုနေတဲ့တထောင်ကြိမ်နေ့, အလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ထိန်းချုပ်မှုကက်ဘိနက်ဝန်ကြီးများအဖွဲ့ကအလုပ်ရုံထဲမှာ set သည်နှင့်ဓာတ်လှေကားခလုတ်ကိုအစာရှောင်ခြင်းတံခါးကို၏အပြင်ဘက်တွင်အပေါ်ပေးအပ်ရမည်ဖြစ်သည်။ အပြင်လူမဝင်ရရန်အဘို့အလြယ္ကူ။
1. Infrared ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးလျှပ်စစ်မျက်စိ: တံခါးကို frame ရဲ့နှစ်ဖက်စလုံးတွင်ရေဒီယိုမျက်စိစွမ်းရှိပါတယ်။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းတံခါးကိုအောက်မှာအတားအဆီးရှိပါတယ်သောအခါ, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ပွင့်လင်းစောင့်ရှောက်; တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ဆငျးသကျသောအခါ, ဖြတ်သန်း object တစ်ခုရှိပါတယ်, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ပွင့်လင်းအနေအထားမှဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မယ်, နှင့်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကိုအောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ အချိန်နှောင့်နှေးပြီးတော့လျော့နည်းစေပါသည်။ ပြင်ပအနီအောက်ရောင်ခြည်စက်ကိုတံခါးလျင်မြန်စွာပြန်တက်ကိုထိန်းချုပ်ဖို့အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတုံမြန်နှုန်းအလွယ်တကူ parameters များကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာ parameters များကိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းအားဖြင့်အနီအောက်ရောင်ခြည်ကိရိယာ၏ function ကိုချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ဆုံးဖြတ်ရန်လည်းဖြစ်နိုင်သည်။ အဆိုပါအနီအောက်ရောင်ခြည်က Single-အချိန်တုံတစ်ခုသို့မဟုတ်ရေရှည် Non-ရွေ့လျားနေသည့် function ကိုရှိမရှိ, ထိမိသောအခါဥပမာ, သတ်မှတ်ချက်ဘောင်ပြင်ဆင်ခြင်းကဆုံးဖြတ်နိုင်ပါတယ်။
2. အောက်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအခြမ်း: တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ထိထိရောက်ရောက်အရာဝတ္ထုသို့မဟုတ်လူကူးကာကွယ်သည့်အရာဝတ္ထုအနီအောက်ရောင်ခြည်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး၏မျက်စိကန်းသောဇုန်အတွက်ကြောင့်တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်အတားအဆီးအောက်မှာဖိသောအခါ, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်လျင်မြန်စွာအထက်သို့ rebounds, ကျသွားတဲ့အခါ မတော်တဆထိခိုက်မှုကိုရှောင်ရှားအောက်တွင်။
လေတိုက်ခုခံ 32 m / s (အမျိုးသားရေးစံနှုန်းလေတိုက်ခုခံအဆငျ့ 12) ဖြစ်ပါသည်။
ရထားလမ်းတံဆိပျ, မျိုးစုံဖျံတံခါးကိုအတွင်းမှနှင့်ပြင်ပရှိလုံနှင့်အထီးကျန်သေချာတံခါးကို panel ကိုအလယ်မှာတံဆိပျ, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်ထိပ်တန်းတံဆိပျ, တံခါးကိုခန္ဓာကိုယ်အောက်ခြေတံဆိပျ, ပဲ့ပြင်။
ကုန်ပစ္စည်းကဏ္ဍ : roller Shutter တံခါး > လူမီနီယမ်ကြိတ်စက် Shutter တံခါး
ပြင်ပလူမီနီယမ်လုံခြုံရေးကြိတ်စက် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်လူမီနီယမ်အလွိုင်းကြိတ်စက် Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ကားဂိုဒေါင်နှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအဘို့အလိုအလျှောက် Rolling Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
လူမီနီယမ်အလွိုင်းနှင့်အတူစက်မှုအလိုအလျောက် Rolling Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ဝေးလံခေါင်သီထိန်းချုပ်ရေးမော်တော်သံမဏိကုလားကာ Rolling တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်လူမီနီယမ်အလွိုင်း Shutter တံခါး အခုတော့ဆက်သွယ်ပါ
ခက်ခဲမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကြိတ်စက်တံခါးဈေးနှုန်း အစာရှောင်ခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို Safe တံခါးကာကွယ်ပေးနိုင်လုံခြုံရေး ကားဂိုဒေါင်ရိုးရှင်းသောခက်မြန်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း PVC ကြိတ်စက်တံခါးဈေးနှုန်း မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းအေးစက်တံခါးဈေးနှုန်း ခက်ခဲမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းကြိတ်စက်တံခါး မြင့်မားသောအမြန်နှုန်းခရုတံခါးဈေးနှုန်း မြင့်မားသောအမြန်နှုန်း Roll Up ကိုတံခါးဈေးနှုန်း